Winget: iyo Windows 10 APT iyo yatinogona kuisa software | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura isu takaburitsa chinyorwa icho ivo vazhinji vanovenga Microsoft vangadai vasina kufarira zvakanyanya nekuti akataura yako browser yeEdge ichiuya kuLinux. Iyo yaingova imwe yehurukuro dzavakaita nezuro paMicrosoft Build 2020, asi paive nezvimwe zvakawanda, senge WSL ichatibvumidza kumhanyisa mafomu eLinux neGUI paWindows 10. Ruzivo rwatichazotaura nezvarwo ikozvino iyo yavakadaidza Winget uye haina zvakawanda zvekuita neLinux, kupfuura zvimwe zvakafanana.
Vazhinji venyu muchawana zano, kunyangwe musina kuverenga chero chinhu nezvazvo, kuti Winget yakafanana neLinux APT, asi yeWindows. Uye ndizvo zvazviri. Chaizvoizvo iri muchikamu chekutanga, chete kune veImukati kana kuburikidza nekuisa manyore, asi, kana yaedzwa, ndinogutsikana kuti ichave iyo inosimudza sarudzo kune isu vashandisi veLinux kana tichifanira kubata Windows. Nekuda kwekureruka kwayo uye nekuti, zvakanaka, isu takazvijaira.
1 Maitiro ekuyedza preview vhezheni yeWinget
2 Inowanikwa mirairo uye sarudzo
Maitiro ekuyedza preview vhezheni yeWinget
Tisati taratidza matanho ari nyore, isu tinofanirwa kutsanangura chimwe chinhu: kana tichiisa package inodiwa tichave tichigadzirisa iyo Windows installer. Kana tikadaro, hapana kudzokera kumashure uye software haizongo gadziridza yega kusvika yabuda beta uye inosanganisirwa muhurongwa hwekushandisa, iyo inogona kunge ichiri mwedzi yakati wandei kana kupfuura. Neizvi zvakatsanangurwa, nhanho dzinotevera ndedzinotevera:
Isu tinovhura bhurawuza uye toenda kune iro peji rerojekiti, iyo yatinokwanisa kuwana kubva pano.
Takadhirowa iyo faira iyo panguva yekunyora ino inoonekwa se Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe.appxbundle.
Isu tinosekesa iyo faira kurodha mudanho 2, kwete pasina kurangarira yambiro yekuti tichave tichigadzirisa iyo Windows 10 mugadziri.
Tevere, tinobaya Gadziridza. Tinomirira. Kana zvikaitika kwauri seni, yekufambira mberi bhaa haizomira pa100%, asi zvisati zvaitika. Meseji ichaonekwa ichitiudza isu kutanga package.
Kana iyo software yaiswa, tinogona kuita bvunzo. Tinogona kuzviita pane yekuraira Prompt, muPowerShell kana mune nyowani Terminal app. Kune vashandisi veLinux, ini ndinokurudzira iyo nyowani Terminal app nekuti inotiyeuchidza zvimwe zvatiri kutoshandisa. Inowanikwa muMicrosoft Store.
Pakupedzisira, tinopinda mirairo, yakadai se "winget install vlc" (isina makotesheni) kuisa VLC. Kana tichida, tinogona kuzviita kubva Run Run launcher iyo ikozvino inowanikwa paWindows key + R.
Inowanikwa mirairo uye sarudzo
Sezvauri kuona muiyo yapfuura vhidhiyo, uchishandisa Winget mune nyowani Windows 10 Terminal app iri yakafanana chaizvo nemabatiro atinozviita muLinux. Musiyano mukuru ndewekuti Winget haatibvunze isu password kana simbiso. Mushure mekupinda iwo wekuraira, senge "winget install vlc", ichatanga kutsvaga iyo repository uye, kana paine mutambo, ichatora nekuimisa. Kusiyana neLinux, zvishandiso, zvirinani parizvino, hazvigone kuvhurwa kubva kune iyo terminal.
Pa webhusaiti yeGitHub, inowanikwa mudanho rekutanga redzidziso, ivo vanotsanangura izvo zviito zviripo, pakati pazvo zvandinofunga zvinonyanya kukosha ndeizvi »kuisa" uye "kutsvaga":
install gadza iyo yakapihwa app.
ratidza inoratidza ruzivo nezve application.
mabviro inogadzirisa zvinyorwa zvekushandisa.
kutsvaka Inotsvaga uye inoratidza ruzivo nezve mafomu.
hashi wizard yekuisa une mafaira.
kutsigira simbisa faira rinoratidza.
-Rubatsiro inopa rairo yekuraira rubatsiro.
-Info inopa yakawedzera data, iyo inobatsira kumatambudziko anomhanyisa software.
–Shanduro inoratidza vhezheni yemutengi.
Ini ndinofunga vashandisi veLinux havafanirwe kutsanangura zvakanakira yegadziriro yekumisikidza seizvi. Kutanga, zvese zvatichaisa isu tichaita kubva kunzvimbo dzepamutemo, iyo ichawedzera zvishoma chengetedzo kuWindows. Kuti uenderere mberi, kana tichiziva zita repakeji kana kuiwana kuburikidza ne "winget yekutsvaga app", hatizofanirwe kuvhura iyo browser uye nekuitsvaga pachedu. Muchidimbu, uye kunyangwe ini ndisingabata Windows zvakanyanya, ndinofara kuti Microsoft "yakaraira" iyi package management uye yekuisa system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Winget: iyo Windows 10 APT iyo yatinogona kuisa software kubva kune iyo terminal
Nguva dzese Windows painenge ichiteedzera zano, sarudzo kana chimiro cheLinux nematafura ayo, zvinobuda mune vezvenhau zvichiti zvinoda Linux nezvose zvemitambo. Dai ndaida Linux uye iyo yemahara kodhi yaisazotisiira isu mafufu, ndaizonyatso bheja nemhinduro dzakakwana. Mugumo? mumwe wangu… .. Ndiri kuenda kuisa spyware Software musi Linux yangu.
Zviripachena kuti Microsoft haina hanya neGnu Linux bledol saizvozvo, kana yakashandura kwazviri imhaka yekuti inoida iyo Windows uye, nekudaro, kuwana nyika yemaseva uko Microsoft iri diki.
Iwe unofanirwa kuve usina ruzivo kuti utende kuti Microsoft inoda Windows, chinhu choga chainoda imari uye nepo Gnu Linux ichishandiswa pazvinangwa zvayo, gamuchira.
Ngatirege kukanganwa kuti chirevo cheMicrosoft (Tora, wedzera, uye kudzima) chave chazvino kupfuura nakare kose.
Ini ndinofunga kuti kana uchifanirwa kuzvienzanisa nechimwe chinhu, zvingave nekushanda kweAUR mune Arch-mhando kugoverwa. dhawunirodha faira rekumisikidza uye kuti ungoriisa sei.
Iyo Nharaunda repo kunotora zvinyorwa kubva apa ndeiyi: https://github.com/microsoft/winget-pkgs. Chero ani anokwanisa kupa.